Xildhibaan Fiqi "Taliyaha Warqada ku saxiixan waa nin la qasbayo" - Jowhar Somali news Leader
Home News Xildhibaan Fiqi “Taliyaha Warqada ku saxiixan waa nin la qasbayo”
Xildhibaan Fiqi “Taliyaha Warqada ku saxiixan waa nin la qasbayo”
Xildhibaan Axmed Macalin Fiqi ayaa ka hadlay warqad ka soo baxday Taliyaha Ciidanka xoogga dalka Jen. Odawaa, kaasoo ahaa amar la siinayo Ciidamada Milateriga ee haya shaqooyinka leexsan inay ku soo xaroodaan xeryahooda.
Axmed Fiqi ayaa sheegay in warqadan ay tahay mid propagando iyo daan-daansi looga gol leeyahay, isagoo xusay in Taliyaha ku saxiixan warqadan uu yahay nin la qasbayo.
“Taliyaha warqadda ku saxiixan waa nin la qasbayo, umana malaynayo in lagala tashaday ama uu wax talo ah ku lahaa ciidamada shaqada leexsan loogu diray Galmudug iyo Gedo, ama uu talo ku leeyahay ciidamada la hayb soocayo ee Madaxtooyada laga bedelay ama ciidanka labada kun ka badan ee shaqada iyo ujeedooyinka leexsan uu Md. Farmaajo ka leeyahay ee uu ku magacaabay ilaaladadiisa”ayuu yiri Axmed Fiqi.
Xildhibaan Fiqi oo sii hadlayay ayaa yiri “Haddii warqaddan ujeedka laga leeyahay ay tahay in madaxweynayaashii hore ilaalada Boqolka ka yar laga qaado, ayadoo Md. Farmaajo rabo inuu isku ilaaliyo 2 kun, loona loogo kooxaha argagixisada ama unugyada qarsoon ee shirqoolada In ay weeraraan madaxdii hore taasi waa qorshe fashilan ee yaan la isku daalin, hana la ogaado In ay albaabada u furayso in ciidamo gaar ah oo ilaalo ah la samaysan doono, kuwaasna aysan jidgooyo u dhigan karin ciidamada beelaysan ee Eritrea soo tababartay”
Sidoo kale Xildhibaan Fiqi ayaa sheegay in Taliyaha looga baahan yahay in haddii awood uu leeyahay inuu soo celiyo Ciidamada loo diray Gedo ee shaqaaqada ka wada iyo kuwa la geeyay Galmudug.
“Haddii taliyuhu uu awood leeyahay oo ciidanka XDS u taliyo oo shaqo qaran ciidamo qabta u baahan yahay ha soo celiyo kuwa Gedo shaqaaqada ka wada, ama Galmudug baagamuudada ku ah ama kuwa Farmaajo isku hubaynayo ee labada kun ka badan wixii intaas ka soo hara waa beegsi gaar ah oo aan loo dulqaadan doonin”ayuu yiri Xildhibaan Fiqi.
Xalay ayay aheyd markii warqad ka soo baxday Taliyaha xoogga dalka uu ku amray shaqooyinka leexsan ee ay qabtaan Ciidanka, isla markaana dhammaan ciidamada xeryahooda ku soo xaroodaan, taasoo durbaba loo fasirtay qorshooyin maalmahan la hadal hayay oo dowladda waday.